Marina Dredging-Kungani Kudingeka-Ellicott Dredges
Uyini uMarina Dredging?
Ukwehliswa kweMarina kuqukethe ukugcina ukujula kwesiteshi okufanele ngaphakathi kolwandle futhi kubalulekile emikhunjini efana nezikebhe, izikebhe, izinsizakalo zezimo eziphuthumayo, kanye nabashayeli bamabhanoyi abazimele abahamba ngemarina. Ukudonswa kwemarina okungaguquguquki kuqinisekisa ukudlula okuphephile kwabahamba ngezikebhe ngaphakathi nangaphandle kolwandle, kugcina i-marina isebenza ngamandla amakhulu unyaka wonke, futhi ivikela imvelo.
Ama marinas amaningi atholakala ngasogwini lwe Umfula, eduze ne echibi, noma endaweni ethekwini elisogwini. AmaMarinas asebenza njengezindawo zokuphepha zabanikazi bezikebhe, osomabhizinisi bezentengiselwano, kanye nezinkampani zezikebhe eziqashisayo ezifuna ukuvikela imikhumbi yazo emimoyeni egelezayo nasemagagasini amakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, udaka, isihlabathi nodaka kuyaqoqana kulo lonke olwandle ngenxa yemisinga yamanzi ehamba kancane, edala ukuthi izikebhe ziwele phansi, zilimaze izikebhe zemikhumbi futhi zinciphise amandla omkhumbi okuhamba olwandle ngokuphepha. Esikhundleni sokungayinaki inkinga, kubalulekile ukuthi abanikazi bama-marina basheshe basebenze, kunokuba basebenze kamuva.
Ukudonsela phansi kusiza ukuthuthukisa ukujula kwesiteshi ngokususa izinto eziphilayo eziqoqana ngaphakathi komgodi wamamina. Izinto eziqoqwe kusuka kumamina phakathi kwenqubo yokutshelwa kwesinye isikhathi zivame ukusetshenziselwa ukwenza kabusha amabhishi endawo.
Ngabe Ukuthinteka KweMarina Kunamuphi Umthelela Kwebhizinisi?
Eminyakeni eminingana edlule, sibone inani elikhulayo lama-marinas wesitayela sangasese nesomphakathi aqhamukayo anikezela ngokuthenga okukodwa ku-waterman ojwayelekile. Lezi zikhungo ezisezingeni eliphakeme zihlinzeka ngezindawo zokuhlala ezinezinkanyezi ezine, ukudla okuhle, iziliphu zemikhumbi ezinkudlwana, izinsizakalo ezinemininingwane yezikebhe, kanye neziteshi zokupompa uphethiloli ezikhiqiza izigidi zamadola minyaka yonke kubanikazi nabasebenza ophahleni lwasolwandle.
Kodwa-ke, imfucumfucu enjenge-sediment yaziwa ngokuqongelela ngokuhamba kwesikhathi kulo lonke lolwandle okwenza kube nzima noma cishe kube nzima kubanikazi bezikebhe ukususa imikhumbi yabo kumasiliphu. Ukuba nohlelo lokugcinwa kabusha kwe-dredge kubalulekile kubo bobabili abanikazi bama-marina namakhasimende abasebenzelayo. Ngaphandle kwalokho, abanikazi bezikebhe zasolwandle baphoqeleka ukuba bavale iziliphu zesikebhe, futhi amakhasimende angajabule athathe ibhizinisi lawo kwenye indawo.
Enye yezinzuzo zokwenziwa kabusha kwe-marina ifaka phakathi imali eyengeziwe evela kwizikejana ezitholakalayo zezikebhe ezincane nezinkulu.
Njengayo yonke impumelelo ephumelelayo, amakhasimende anelisekile azoba nomphumela webhizinisi elichumayo.
Ngokungeziwe ekuthuthukiseni ukuzulazula, ukudonsa kabusha kubalulekile ekugcineni ulwandle oluphephile kwezemvelo. Ukwehliswa kokugcinwa kabusha kwempahla kuye kwaziwa futhi ukusiza ukuthuthukisa ikhwalithi yamanzi nezimo zemvelo. Imarina emiswe kahle yehlisa amathuba okuba ophephela bezikebhe baphazamise ulwandle futhi bagubungele amanzi.
Izinto eziqoqiwe ngemuva kokudonswa phansi kufanele ziphathwe ngobumnandi ngendlela engalimazi imvelo. Kunokukhethwa okuningana okutholakalayo kwabanikazi bemikhiqizo yasolwandle nabasebenza ophethe lapho bephatha impahla ekhiqizwayo kufaka phakathi ukukhipha okuvulekile, izindawo ezibekiwe zokubekwa kwezinto ezibonakalayo, ukukhipha amanzi ngomshini kanye nokusebenzisa amashubhu akhipha amanzi.
Enye yezinzuzo zemvelo zokuba ne-dredge ifaka phakathi amandla we-marina opharetha wokunquma ukushesha kokukhiqizwa kwedredge, okuvumela ukuthi i-dredge isebenze ngesikali esincane. Lokhu kuvimba okokusebenza ekubuyiseleni emuva kuma-marinas atholakala eduze komfula okungenzeka uma usebenzisa usonkontileka.
Uhlobo Olungile lweMishini Yokudonsa iMarina
Isinqumo sokuthenga i-dredge noma ukucela usonkontileka ngokuqinisekile sizoncika kubukhulu, indawo, kanye nasekusebenziseni imarina. Uma udonsa i-marina yakho minyaka yonke, kufanele uthenge i-dredge ukugwema izindleko eziqhubekayo zokugqugquzela kanye nokwehlisa amandla. Ngeminye imininingwane mayelana nokukhetha i-dredge efanele, xhumana nethimba lethu ku sale@dredge.com Noma shayela + 1-410-625-0808.